Kuwana Mutongi Vagadziri & Vatengesi - China Kuwana Mutongi Fekitori
WS6000-M500P6 Akangwara Akabatanidzwa Wireless Mutauri
WS6000-M500P6 ndeye yakawanda-sevhisi isina waya controller iyo inosanganisa kuisirwa chokwadi, netiweki manejimendi uye isina waya yekuwana poindi yekudzora, inoratidzira manejimendi manejimendi, nyore kugadzirisa, kugona kukuru uye kuita kwakanyanya. Iyo yakagadziriswa kune diki uye yepakati saizi netiweki, inogona kubata inosvika mazana mashanu nemakumi mashanu neshanu mapinda ekuwana (APs). Iine iyo nyowani-nyowani desktop oparesheni interface uye dhizaini dhizaini, WS6000-M500P6 iri nyore kushanda uye nyore kuchengetedza uye kuendesa, iyo inogona kunyatsogutsa mutengi requir ...
DCWS-6028-C Smart Access Anodzora
DCN DCWS-6028-C chizvarwa chitsva chepamusoro-kuita 10G akangwara waya isina waya. Yakagadzirirwa chizvarwa chitsva chepamhepo-isina waya netiweki, inogona kubata inosvika mazana maviri neshanu isina waya mapindiro (APs) uye inokodzera diki uye yepakati-saizi isina waya netiweki. DCWS-6028-C inosanganisa chaiyo yekushandisa manejimendi manejimendi, yakakwana RF manejimendi uye nzira dzekuchengetedza, super QoS uye isina musono kudzungaira, ichipa ine simba WLAN yekuwana yekudzivirira mabasa. DCWS-6028-C ine yakazara dura 3 musimboti switch switch ...
DCWS-6028 (R2) Wired uye Wireless Yakabatanidzwa Smart Access Controller
Iyo DCWS-6028 (R2) ndeye yakakwira-inoshanda smart isina waya yekuwana controller (AC) yepakati isina waya netiweki, iyo inogona kubata kusvika gumi nematanhatu ekuwana mapoinzi (APs). Inopa yakazara RF manejimendi uye chengetedzo mashandiro, ane simba QoS, isina musono kutenderera uye kutonga kwakazara kwemaAPs, inogona kushandiswa kuvaka yepakati-saizi network kune kambasi, hotera, bhizinesi hofisi, chipatara, nezvimwewo Neye Hardware ASIC, DCWS-6028 (R2 ) inogona kutsigira mutsara-chiyero chekutumira kwePv4 / IPv6 data mapaketi uye inotsigira ine simba nzira ...